Wadaniyadii Farmaajo oo ku soo dhaamatay in uu qoyskiisa iyo qabiilkiisa ka shaqaaleysiiyo Villa Soomaaliya (Xog iyo Cadeymo) - Muqdisho Online
Home Wararka Wadaniyadii Farmaajo oo ku soo dhaamatay in uu qoyskiisa iyo qabiilkiisa ka shaqaaleysiiyo...
Wadaniyadii Farmaajo oo ku soo dhaamatay in uu qoyskiisa iyo qabiilkiisa ka shaqaaleysiiyo Villa Soomaaliya (Xog iyo Cadeymo)
Sida MOL ay horay idinkuugu soo tabisay waxaa maalintii shalay ahayd la magacaabay Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada. Magacaabista la magacaabay Nuur Diiriye Fuursadema aha mid ku timid deg deg balse waxa ay ka mid tahay talaabooyin uu in mudo ah qaadaayay Madaxweyne Farmaajo taas oo uu ilihii dhaqaalaha dalka iyo hogaanka madaxtooyada Soomaaliya uu gacanta u galiyay dad ay ehel yihiin.
Farmaajo oo in mudo ah shacabka Soomaaliyeed u sheegayay in uu yahay wadani ka fog musuq-maasuq iyo qabyaaladaysiga ayaa waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa soo baxay dareenkiisa runta ah. Shacabka Soomaaliyeed oo ah dad aad u dulqaad badan ayaa wax ka sii dhamaanaya dulqaadkii ay u hayeen Farmaajo iyaga oo arkaya halka uu kuwdo dalka iyo hogaan xumadiisa, taas oo uu hadana ku darsaday qabiileysi iyo beelaysi.
Waa kuwan dadka eheladiisa ah ee uu ka shaqaleysiiyay Villa Soomaaliya:
Nuur Diiriye Fuursade: Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka xishoon waayay in uu jago u magacaabo nin ay xidid yihiin. Nuur Diiriye Fuursadewaxa uu qabaa oo caruur u dhashayXuriyo Aadan Yuusuf oo habar yar u ah xaaska Madaxweyne Farmaajo., Zaynab Cabdi Macallin. Xuriyo Aadan Yuusuf ayaa waxa ay soo korsatay Zeynab. Farmaajo ayaa waxa uu ka soo guursday Zeynab Macalin guriga Nuur Diiriye Fuursade, Zeynab waxa soo korsaday oo soo barbaariyaya ninka hadda loo maacabaay Agaasimaha Madaxtooyada.
Maxamed Cusman Balal:Lataliyaga gaarka ee Madaxweyne Farmaajo waxaa ah Maxmed Cusmaan Balal. Waa ninka Farmaajo u hayo lacagaha iyo dhaqaalaha,. Balal waxa uu ilma adeer la yahay Farmaajo. Ma aha qof aqoon ku yimid basle waxa uu u keensaday in uu sirta u hayo isla markaana dhaqaalaha uu u ururiyo.
Cumar Faaruuq Cabdi Macallin:Waxa uu la dhashay Marwada Madaxweynaha Zaynab Cabdi Macallin, waxa uu mushaar ka qaataa Madaxtooyada isaga oo lagu sheego in uu yahay la taliyaha sare ee Madaxweynaha
Xassan Cabdullahi Farmaajo:Waxaa uu la dhashay Farmaajp waxa uuna ka mid yahay dadka ku dhaw-dhaw madaxweynaha, waxa uu mushaar ka qaataa Madaxtooyda iyo hay’adda NISA.
Xussen Gandish (Xuseen Dhere):Waxa ay ay ilma adeer yihiin Xaaska Madaxweyne Farmaajo Zeynab Macalin. Wxaaa lagas oo kaxeeyay dalka Maraykana, waxa lagu qaatay jago loogu sheegay ay tahay la taliyaha madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha ee xagga dhaqaalaha
Ahmad Farah:Waa ay ehel yihiin Farmaajo waxaana lagu sheegaa in uu ka mid yahay milkiilayashaada dowlada. Waxaana dhawaan lagu wareejiyay qandaraaska shirkadaha Shiinaha ee kuluumeysta badda Soomaaliya.
Nasro Wehliye:Waxa ay tahay lataliyaha Xaaska Madaxweyne Farmaajo ee arimaha Haweenka iyo Qabiilka. Narso waxa ay horay ugu soo fashilantay hogaanka shirkada Nationlink.
Nuur Diiriye Fuursade oo kulan kula jira Gabadhiisa (Zeynab Macalin-xaaska Farmaajo) iyaga oo jooga dalka Qatar
Waxaa nasiib xumo ah in MW Farmaajo uu madaxtooyadii dalka (Villa Soomaaliya) uu ku wareejiyo dad ay ehel yihiin. Talabada uu qaaday Farmaajo ayaa xasuusinaysa shacabka Soomaaliyeed dhaqankii Madaxweynihi hore ee Soomaaliya Maxamed Siyad Barre oo xiligii uu gababsiga ahaa dalka u gacalnta u geliyay beesha uu ka dhashay taas oo soo dadajisay dagaalkii sokeeye ee lagu baaba’ay
Cabdinur Maxamed oo ka mida dhalinta Muqdishu ku nool ayaa yiri “ anigu waxaan ka mid ahaa dhalinta taageersanayd Farmaajo, waxa aan u arkaayay halyeey wadani Soomaali ah, laakiin waxa aad uga xumahay in uu kala garan waayay danta dalka iyo tan beesha uu ka dhashaya ama tan naagta uu qabo”.
Previous articleXaaf” Markii aan Farmaajo hub weeydiisanay Caabud-waaq miyaad ku weerareeysan ayuu nagu yiri (Aqriso)